Fairway Solitaire APK ကို + OBB ဒေါင်းလုပ် - လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Fairway Solitaire APK ကို + OBB ဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Fairway Solitaire APK ကိုဒေါင်းလုပ်: ကြီးမားတဲ့ငါးကြောင်း Fairway Solitaire ကြေညာဖို့မင်္ဂလာရှိ၏™ နောက်တဖန်ဖြစ်ပါသည်, ထိုသို့အစဉ်အဆက်ထက်ပိုကြီးပြီးပိုမြင့်! ထွက်အဲဒီမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်စွဲလမ်းကဒ်ဂိမ်း၏အချို့ထက် သာ. ကြီးမြတ်အပေါ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း solitaire လက်နက်များပါရှိသည် 408 လက်ထွင်းထုဂေါက်သီးတွင်း, လေး mini ကိုဂိမ်း, 37 ဆုဖလား, တစ်ဦးဂေါက်သီးစတိုးဆိုင်, ဂေါက်သီးညော, အန္တရာယ်ကစားကတ်များ, တအလေးအနက်ထား Gopher ကိုချွတ်အမှန်ခြစ်!
“solitaire အဖြစ်ဖြင့် Information ... မယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ပဟေဠိဂိမ်း။” – ပဲန်နီ Arcade
“ဒါဟာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတစ်ရိုးကဒ်ဂိမ်းတူလိမ့်မယ်သို့သော်၎င်း၏စိတ်ချစွာမှ Fairway Solitaire ဖို့ပိုပြီးကျေးဇူးတင်စကားရှိပါတယ်, တီထွင်ဒီဇိုင်း. ဒါဟာအကျယ်ပျော်စရာင်, တစ်ဦး Tee မှပဟေဠိပရိတ်သတ်တွေကိုက်ညီသင့်ကြောင်းအလုံးစုံပွတ်မဟာဗျူဟာမြောက်ကုန်းပတ် shuffler ။” PocketGamer: ရှစ် / 10
ဒီ Gopher ၏ Hilary ငေါ့ပုံပြင်နှင့်သူ၏ကြွက်ကြွက်ဆူအထင်အမြင်သေးစောငျ့ရှောကျနဲ့သူတို့ရဲ့နေရာအရပ်ရှိသမျှတို့ဂေါက်သီးနေရာရန်လိုအပ်ပါတယ်! beachside အစီအစဉ်များကနေအရပျကိုထန်းချုံတော့ဘူး, illuminated မြို့တော်အစီအစဉ်များ၏ Hustle နှင့်ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားရန်, ဒီ Gopher နှင့်အတူလိုက်လျော gained't ဘယ်နေရာမှာရှိဖြစ်နိုင်သည်၏ရလဒ်အဖြစ်ဆုချီးမြှင့်ပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိထိနျးသိမျး. သပိတ်၏အနည်းဆုံးအရေအတွက်အသုံးချဖို့အဆိုပါကတ်ထူပြားကုန်းပတ်ရှင်းလင်းရေးအားဖြင့်အကောင်းဆုံးပြေး rating, ဤ mulligans အကြောင်းကိုမဟုတ်လျစ်လျူရှုပြုပါ! တန်းတူအောက်နှစ်ဆ bogey သို့မဟုတ်သုံးခုသွင်းယူဖြစ်စေမ, ဒီ hit သင်ဂေါက်ကွင်းအပေါ်တိတ်ဆိတ်ဖြစ်လစျြလြူရှုပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အသံကျယ်ရယ်မောခဲ့ကြပေမည်!
အခမဲ့အိုင်တီစမ်းကြည့်ပါ, ထိုအခါဂိမ်းအတွင်းမှအပြည့်အဝ Adventures သော့ဖွင့်!
Survivalcraft2APK ကို 2.1.14.0 ဒေါင်းလုပ်
The Sims မိုဘိုင်း APK ကိုဒေါင်းလုပ်
Solitaire APK ကိုဒေါင်းလုပ်
critical Ops APK ကိုဒေါင်းလုပ်
3: D ရေကူးကန် Ball ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ်
MX Player ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ်
☆☆☆☆☆ Options ကို☆☆☆☆☆
သင့်ရဲ့ဂေါက်သီးအိတ်မှထည့်သွင်းဖို့အဖြစ်ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံအပေါ်ကတ်များကစား✓ Discover သံ
✓ရေသတိထားပါ, သပ်, သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုကြည့်ယူကြောင်းနှင့်ခက်ခဲတဲ့ကစားကတ်များ!
✓ကတ်များကစားတောရိုင်း Shot တစ်ဦးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဂေါက်သီးအပန်းဖြေစေသို့မဟုတ်ချိုးနိုင်နှစ်ဦးစလုံး!
ကြီးမားတဲ့ငါးအလွတ်သဘောဂိမ်းထဲမှာရှာပြီး luxuriate ဖို့အဓိကကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအချိန်မရွေးဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးမရေမတွက်နိုင်အောင်စုစည်းနှစ်သက်ယူစေခြင်းငှါ, anyplace - သင့်ရဲ့ PC အတွက်, မက်, ဆဲလ်ဖုန်း, သို့မဟုတ်ဆေးလုံး. bigfishgames.com မှာအပိုလေ့လာဖို့!
PayPal ကဒီနေရာတွင် Download
Solitaire APK ကိုဒေါင်းလုပ် – Android အတွက်အခမဲ့ကတ် GAME
UTP – အဆုံးစွန်ဆယ်ကျော်သက် Patti APK ကိုဒေါင်းလုပ်
ကျနော်တို့အထဲကအဲဒီမှာယခုအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောကောင်းတဲ့ကို Google Play စဂိမ်းများကိုရှိ. ရိုးရှင်းစွာအမျိုးကြီးမားတဲ့ငါးဗီဒီယိုဂိမ်း '၌’ အပိုပျော်စရာများနှင့်လမ်းခရီးဘို့!
Fairway Solitaire APK ကို Download လုပ်ပါ
ကင်မရာ Timestamp Add-on 1.20
FireDL APK ကိုဒေါင်းလုပ် – Android အတွက်အခမဲ့ Tools များ APP | လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
APK ကို musical.ly က Android များအတွက် Download | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
အခမဲ့ SD ကအိမ်ဖော် Pro ကို – အန်းဒရွိုက်သည် Unlocker optional ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ်
ကတ္တရာစေး 8 ဝေဟင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး APK ကို + ဒေတာများ (Unlimited ငွေ) ဒေါင်းလုပ်
PC ကွန်ပျူတာ Laptop ကို Windows ကသည် PlayBox HD ကို 7/8.1/10 – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ